Ndị ntorobịa Xiaomi Mi 8 ka agbapụtara na TENAA | Androidsis
N'oge na-adịbeghị anya, anyị gwara gị banyere ya Xiaomi Mi 8 Ntorobịa, smartphone nke ọzọ nke ụlọ ọrụ nke a na-atụ anya ịbịakọta ọnụ na Mi 8 Screen Fingerprint Edition n'etiti ọnwa na-esote Ọktọba. Ugbu a, ọ bụ akụkọ ọzọ, n'ihi na ngwaọrụ dị omimi nke dị na nnukwu ndị China, edenyere aha n'okpuru aha koodu "Xiaomi M1808D2TE", agbabawo na TENAAma Ihe niile na-egosi n'eziokwu na nke a bụ otu.
Onye ntorobịa Mi 8 bu ihe adighi ike nke ngwaọrụ Mi 8 ndi ozo, dị ka nkọwa ndị ọ ga-esi bịa. Ihe ndị a rụtụrụ aka na ihuenyo LCD nke 6.26 nke anụ ọhịa nwere mkpebi FullHD + nke pikselụ 2.280 x 1.080 na akụkụ akụkụ nke 19: 9.
Dị ka ụlọ ọrụ na-achịkwa iwu nke China si kwuo, ekwentị gosipụtara na nchekwa data ya na-arụ ọrụ na octa-core processor na ọsọ nke 2.2GHz. Nke a kwenyere na ọ bụ SoC Snapdragon 710, nke na-enyekwa nri na Mi 8 SE. Na mgbakwunye, ọ na-abịa na nhazi atọ nke RAM na ebe nchekwa dị n'ime: 4 GB + 32 GB, 6 GB + 64 GB na 8 GB + 128 GB.
N'aka nke ọzọ, TENAA gwara anyị na Mi 8 Ntorobịa nwere mkpebi igwefoto 24MP na igwefoto abụọ na azụ, nke otu n'ime ihe mmetụta sensọ foto ya bụ 12MP, mana akọwapụtaghị ihe ntanetị nke abụọ. N'adịghị ka ndị ọzọ Mi 8 ngwaọrụ ndị kwụwara n'azụ ese foto n'azụ, n'azụ ese foto nke Mi 8 Ntorobịa na-emi odude odude. Enwekwara akara mkpisiaka na azụ ekwentị.
N'ikpeazụ, ngwaọrụ na-agba ọsọ gam akporo 8.1 Oreo, o nwere ihe mmetụta infrared na oghere kaadi microSD. Na mgbakwunye, o nwere batrị 3.250 mAh, tụrụ 156.4 x 75.8 x 7.5 mm wee tụọ gram 169. Okwesiri ikwuputa na edere otutu uzo di iche iche na uzo: ojii, ocha ocha, acha ocha, acha anụnụ anụnụ, uhie, pink, isi awọ, ocha, ocha, acha odo odo-acha odo odo na gradient gradient, ya mere anyi gha enwe otutu uzo mgbe o abịarute n'ahịa ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ihe omimi Xiaomi M1808D2TE na - ejeghari na TENAA. Ọ ga-abụ Mi 8 Ntorobịa?